UTrinidad owazalelwa umbalisi wezindaba waseCanada ukuthola umklomelo we-CTO Lifetime Achievement Award
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Imiklomelo » UTrinidad owazalelwa umbalisi wezindaba waseCanada ukuthola umklomelo we-CTO Lifetime Achievement Award
Izindaba Zezinhlangano • Imiklomelo • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • ICanada Breaking News • Amasiko • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-Trinidad neTobago Breaking News
Ukugcina umlando wesifunda kubalulekile ukuze izizukulwane ezizayo ziqonde ifa lazo. I- Inhlangano Yezokuvakasha yaseCaribbean (I-CTO) ithole umbalisi wezindaba ophelele eTrinidad owazalelwa eCanada uRita Cox obhala ngefa laseCaribbean, futhi uzomhlonipha ngeLifetime Achievement Award ngesikhathi sesidlo sasemini seMedia Day Toronto ngo-Agasti 22.
Umsebenzi wasemtatsheni wezincwadi, uCox ungumbalisi wezindaba owaziwayo futhi ongumholi ohlonishwayo emphakathini. Ujoyine umtapo wolwazi womphakathi waseToronto njengomtapo wolwazi wezingane ngo-1960 kwathi ngo-1972 waba yinhloko yegatsha laseParkdale lapho wethula khona izinhlelo zokufunda nokubhala kanye nezinye izinhlelo ezazikhuthaza amasiko amaningi kulo lonke elaseToronto. Esesikhundleni sakhe, uCox waphayona i "Black Heritage and West Indian Resource Collection," eyaqanjwa kabusha ngo-1998 yaba yi “Black and Caribbean Heritage Collection.” Ngokushesha yaba elinye lamaqoqo aphelele kunawo wonke alolo hlobo eCanada nanamuhla, liyaqhubeka nokuba ngumthombo wokuziqhenya ngomphakathi.
"ICaribbean Tourism Organisation iyaluthakasela uthando lukaRita Cox lokuqhakambisa amagugu aseCaribbean ngeqoqo alenzele umtapo wolwazi waseToronto kanye nemicimbi yakhe yokuxoxa izindaba edlulisela umlando wethu esizukulwaneni esilandelayo," kusho uSylma Brown, umqondisi we-CTO-USA. "Ukuzibophezela kwakhe ekulondolozeni isiko laseCaribbean kanye nokuzinikela kwakhe ekugcineni lesi sifunda sisezingeni eliphakeme emphakathini waseCanada emashumini eminyaka edlule yingakho simhlonipha ngomklomelo wokuzuza impilo yakhe yonke."
UCox usungule i- “Cumbayah,” umkhosi wamagugu amnyama nokuxoxa izindaba. Njengombalisi wezindaba owaziwayo ojabulise izethameli emhlabeni wonke, futhi waqinisekisa ifa lokuxoxa izindaba lomtapo wolwazi womphakathi waseToronto ngokuqeqesha isizukulwane esisha sababalisi bezindaba, iningi labo okungabasebenzi bomtapo wolwazi njengamanje. Ngemuva kokuthatha umhlalaphansi emtatsheni wezincwadi womphakathi waseToronto ngo-1995, uCox waqokwa njengejaji lasenkantolo yobuzwe nguhulumeni waseCanada.
UCox uzuze imiklomelo eminingi, kufaka phakathi i-Canadian Library Association's Public Service Award kanye neBlack Achievement Award (1986). Ngo-1997, uDkt. Cox waqokwa njengelungu le-Order of Canada ngomsebenzi wakhe ovelele wokuxoxa izindaba nokubhala. Bobabili iWilfrid Laurier University neYork University bamnikeze iziqu zobudokotela ezihloniphekile.
I-Blossom Hotel Houston Yengeza Ukunikezwa Okusha Okuvula Ku...